के कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीले नै नमानेका हुन् त? – PathivaraOnline
Home > समाचार > के कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीले नै नमानेका हुन् त?
admin September 15, 2020 September 15, 2020 समाचार	0
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नचाहेका कारण कुलमानलाई पुन नियुक्त नभएको बताइएको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनलाई नियुक्त गर्न ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले विषय प्रवेश गराएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे कुनै निर्णय लिन मानेनन् । अब प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा प्रतिष्पर्धाबाट चयन गरिने तयारी भएको बुझिएको छ ।
सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनलाई नियुक्त गर्न ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले विषय प्रवेश गराएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे कुनै निर्णय लिन मानेनन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक बन्न प्रतिष्पर्धाबाट आउनुपर्ने विषय उठाए पछि कुलमानको पुन नियुक्ति नभएको हो ।
३३ बर्षकि युवतीको आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, यति भएपछि केटालाई के चाहियो !
पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीका आमाबुबालाई विमानमा काठमाडौं ल्याइयो